| ऊ गएको सात बसन्त
ऊ गएको सात बसन्त
म यसलाई विवाह नै मान्दछु । आज मेरो छोरो छ बर्षको भयो , बा खोई भनेर सधै सोधिरहन्छ । मैले उसलाई भन्ने गर्छु तिम्रो बाबा धेरै टाढा जानुभएको छ ।आउन धेरै वर्ष लागिसक्यो अझै कति लाग्छ थाहा छैन भन्दै सम्झाउंछु । अनि कति लामो बाटो हगी ?
विचरा त्यो अबोधको अभिव्यक्तिले मलाई विगतका कुरा सम्झना मन नहुदा नहुदै पनि बाध्यताका तीरहरुले छेडीरहन्छन । किन किन आँखामा मोतिका दाना टिलपिल टिलपिल गर्दै तँ झर्ने कि मा झर्ने भन्दै बग्न आतुर थिए । .. उ गएको सात बसन्त काट्दैछ तर उ फर्कियेन । मनमा नाना किसिमका तरङ्ग विरंग उर्लिरहेका छन् । जाने बेलामा सानी म चाडै आउछु है ! भनेर भनेको आवाज मेरो मनमा अझै ताजै छ ।
हिमाली डाँडाको देउरालीको चौतारीमा बसेर जीवनका अनेकौं सपनाहरु साटासाट गर्दै मन्द मुस्कानमा गरेका कुराहरु मेरो कानमा अझै गुन्जी रहेका छन् । फेरी सम्झिए उ गएको अनि मेरो मन बाट टाढा भएको आज सात वर्ष लाग्दैछ, तर पनि म आज उसको बाटो पर्खीरहेको छु ।
हिमाली शितलताको छाहारीमा लुकामारी गर्दै जीवनका हरेक पलमा साथ् हुने बाचा गर्दै, अनुपम प्राकृतिक सुन्दरतासंग मायाँ गाँस्दै जुनी जुनी मायाँ गाँस्ने बाचाका साथ् हामी एक अर्कामा समर्पित थियौं तर आज म बटा उ धेरै टाढा छ । उसले भन्थ्यो "सानी हाम्रो सुन्दर भविष्य बनाउन, हाम्रो मायालाई जीवन्त राख्न, म विदेश जाने पर्छ । त्यसैले तिमि मान । आफ्नो ख्याल राख ।"
उसले भनेका कुरा मेरो मानसपटलमा घुमिरहेका थिए ।सायद उ जाने समय आउदै थियो । जसले मलाइ धेरै माया गर्थ्यो, अनि धेरै साथ दिन्थ्यो, जो मेरो सर्वोच्च थियो, अब उ टाढा जान लागेको थियो । यो कुराले मेरो मन स्वभावैले निरास भएको थियो, तरपनि मैले मनलाई दरिलो बनाएर हाम्रो आउने अन्तिम भेटलाई प्रतिक्षा गरिरहेको थिए ।
उसले मलाइ जाने अघिल्लो दिन बोलाएको थियो । म हाम्रो नियमित भेट्ने ठाउँ देउरालीमा गएँ । उ पर्खेर बसेको थियो म उसलाई देख्ने बितिकै रोएँ । उसले मलाइ सम्झायो 'म आइहाल्छु नि किन रोएकी ? म हाम्रो मायालाई साकार बनाउन जादैछु, एक दुइ बर्षमा त आइहाल्छु , अनि हाम्रो बिहे हुन्छ त्यसपछि त हाम्रो जीवन मायाले भरिन्छ नि ' उ भन्दै थियो । म केहि बोलिन मौन सहमति जनाएर आँखाभरी आँसु पार्दै त्याहाबाट छुट्यौं हामि ।त्यो रात म एकछिन पनि निदाउन सकिन । मेरो मनले अनेकौं कुरा सोधिरहेका थिए । मलाइ पटक्कै निन्द्रा लागेन । त्यो नै हाम्रो अन्तिम भेट रहेछ ।
खै उसले मलाइ न त फोन गर्यो नत चिठी नै पठायो, न त केहि खबर नै छ । जो म आज सम्म पनि उसलाई पर्खिरहेको छु । तिम्रो मायाको चिनो पनि ठुलो भैसक्यो । तर उसले मलाइ एक रति पनि माया नगरेको अनुभूति भैरहेको छ ।
अझै उसको मेरो भेटको सपना बोकेर बाँचीरहेको छु ।खै ! उ त गएको सात वर्ष भैसक्यो । उसले मलाई विर्षे पनि मेरो मायालाई त सम्झनु पर्ने त हो नि । हाम्रो रगतको चिनोलाई सम्झनु पर्ने त हो नि ।सायद उसलाई थाह छ या छैन हाम्रो छोरो छ वर्षको भैसक्यो । बाबाको बारेमा सोधेर मलाई सधै कच्कच् गरिरहन्छ । म उसलाई टारीदिन्छु तर सत्य त उसले एकदिन थाह पाउछ ।
त्यसैले म आजपनि उसको आगमनको प्रतिक्षाम आतुर भइरहेकी छु ।
नायक अमिताभ बच्चनले सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका स्टाटस र तस्बिरले लाखौ कमेन्ट र लाइक पाएका छन् । यतिमात्र होइन, अमिताभको स्टाटस र तस्बिरले लाखौलाई प्र... विस्तृतमा
दाङ । राप्ती राजमार्गअन्तर्गत दाङको फूलबारीस्थित बखरिया मोडमा बिहीबार बिहान बस र ट्रक एकापसमा ठोक्किँदा २३ जना घाइते भएका छन् । सो घटनामा पाँचज... विस्तृतमा
चितवन। पछिल्लो समय निकै चलेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले विश्वलाई साँघुरो घेरामा ल्याएको छ । तर, यसको दुरुपयोगका कारण धेरै नागरिक ठगिँदै पनि आएका छन् ।... विस्तृतमा
Kathmandu, March 2: Prime Minister Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda' has said it is inevitable to bring in foreign direct investment for the coun... विस्तृतमा
दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष सन् २०१८को लागी नेपाली कामदारको कोटा तीन गुना बढायो
काठमाडौं— नेपालीहरुको रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष सन् २०१८को लागी नेपाली कामदारको कोटा तीन गुना बढाएर १० हजार २ सय पुर्‍याएको छ। यस वर्ष ३हजार १ सय जनालाई मात्र कोटा... विस्तृतमा
मापदण्ड पूरा नगरी ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु
काठमाडौ – शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ... विस्तृतमा
नायक अमिताभ बच्चनले सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका स्टाटस र तस्बिरले लाखौ कमेन्ट र लाइक पाएका छन् । यतिमात्र होइन, अमिताभको स्टाटस र तस्बिरले लाखौलाई प्रेरणा पनि दिएको हुन्छ ।... विस्तृतमा
नेपाली गीत संगीतका चर्चित गीतकार सुभाषचन्द्र ढुंगेलको शब्द, ख्यातिप्राप्त गायक तथा संगीतकार स्व. राम थापा तथा तारा थापाको आवाजमा रहेको ३ दशक भन्दा पुरानो र सर्वाधिक लोकप्रिय गीत सि... विस्तृतमा
'मन पराएका लाई स्वीकार्न सजिलो छ , हाँसी हाँसी बिदा गर्न पो हिम्मत चाहिन्छ।' नयाँ बर्ष २०७४ को पहिलो दिन अर्थात आउँदो बैशाख १ मा रिलिजको लागी तयार फिल्म 'लभ लभ लभ'म... विस्तृतमा
चर्चित भारतिय कमेडियन भारती सिंह विवाह वन्धनमा बाँधिने भएकी छन्। उनले आफू भन्दा ७ वर्ष कान्छा हर्ष लीमभाचियासँग विवाह गर्न लागेकी हुन्। उनीहरूले लामो समयदेखी एकअर्कालाई डेट गर्दै आ... विस्तृतमा
प्रधानमन्त्री महिला भलिबल प्रतियोगिता भारतको रेल्वे टोलीको पक्षमा
नेपालगन्ज । चौथो संस्करणको यहाँ सञ्चालित प्रधानमन्त्री महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतको रेल्वे टोलीको पक्षमा गएको छ । प्रतियोगिताअन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा भारतको र... विस्तृतमा
विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप : पहिलो खेलमै नेपाल पराजित
काठमाडौँ, आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तरगत केन्यासँगको खेलअघि अभ्यासको लागि भारतमा रहेको नेपाली टोलीले पहिलो खेलमा हार बेहोरेको छ । अभ्यासको पहिलो खेलमा नेपाली टोलीले भा... विस्तृतमा
आज सेमिफाइनल खेल खेल्दै मनाङ मस्र्याग्दी क्लव
काठमाडौं । नेपालको मनाङ मस्र्याग्दी क्लवले बंगलादेशका जारी शेख कमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लव कप फुटबल प्रतियोगितामा आज सेमिफाइनल खेल खेल्दैछ । सेमिफाइनलमा मनाङको भिडन्त माल्दिभ... विस्तृतमा
चैतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने
म्याग्दी । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा आगामी चैतमा राष्ट्रियस्तरको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने भएको छ । म्याग्दीका युवाको नेतृत्वमा काठमाडौँमा स्थापित गंगटा युथ क्लबको आयोजनामा च... विस्तृतमा
मनाङ मर्स्याङ्दी अन्तिम चारमा
चित्तगोङ- मोहमडन स्पोर्टिङ क्लबले शुक्रबार सहिन अस्मायीलाई २–० ले पराजित गरेपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शेख कमल अन्तर्राष्ट्रिय क्लब कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको अन... विस्तृतमा
प्रमुख तीन क्यान्सरको उपचार सरकारले नि:शुल्क गर्ने
काठमाडौं – महिलामा हुने प्रमुख तीन क्यान्सरको उपचार सरकारले नि:शुल्क गर्ने भएको खबर आजको नागरिकमा छ । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले विकसित देशमा घट्... विस्तृतमा
डन्डिफोर किन आउँछ ?
छालाको उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामीमध्ये धेरैजसो डन्डिफोरले हैरान पारेको समस्या सुनाउँछन् । डन्डिफोरको समस्या नभोग्ने सायदै होलान् । जीवनकालमा अधिकांश व्यक्तिले डन्डिफोरको समस्... विस्तृतमा
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरे आफ्नो शरीरका सात अंग दान
भक्तपुर – स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आफ्ना शरीरका सात वटा अंग दान गरेका छन् । उनले मृत्युपश्चात् मुटु, फोक्सो, कलेजो, प्यान्क्रियाज, मिर्गौलालगायत दान गर्ने मञ्जुरी दिए... विस्तृतमा
तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको प्रयोगले गर्भवती र नवजात शिशुमा क्यान्सर
बर्दिया । विषादी प्रयोग गरेको तरकारी तथा फलफूल सेवनले सबैभन्दा बढी असर गर्भवती महिलालाई हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको विषादीको प्रयोगले गर्भवत... विस्तृतमा